» टेलिकमको सेवाबारे कुनै गुनासो छ ? फोन गर्नुस यी नम्बरमा
टेलिकमको सेवाबारे कुनै गुनासो छ ? फोन गर्नुस यी नम्बरमा
२०७७ चैत्र २६, बिहीबार ११:१५
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आफ्ना सेवाबारे जानकारी दिन चार वटा सम्पर्क नम्बरहरुमा निःशुल्क फोन गर्न सकिने सुबिधा दिईरहेको छ ।
टेलिकमले १९१, १९७, १९८ र १४९८ नम्बरहरु मार्फत कम्पनीका सेवा सम्बन्धमा र गुनासाहरुको पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
१९१ – कस्टुमर केयर सेवा) जीएसएम, सीडीएमए र वाइम्याक्स सेवाको बारेमा जानकारी लिनका लागि १९१ नम्बरमा कल गर्न सकिन्छ । १९१ नम्बरमा कल गरेपछि प्राप्त निर्देशन अनुसार जीएसएमको लागि अंक १, सीडीएमएको लागि अंक २ र वाइम्याक्सका लागि अंक ३ थिच्नुपर्छ । त्यसपछि सम्बन्धित सेवाका बारेमा जिज्ञासा राख्न र गुनासो टिपाउन सकिन्छ ।